Football Khabar » रियल मड्रिडमा हाजार्डले कति नम्बरको जर्सी लगाउँदैछन् ?
रियल मड्रिडमा हाजार्डले कति नम्बरको जर्सी लगाउँदैछन् ?
स्पेनिस रियल मड्रिडले यसै साता बेल्जियमका स्टार खेलाडी इडेन हाजार्ड अनुबन्धको घोषणा गर्दैछ । इंग्लिस क्लब चेल्सी छाडेर हाजार्ड रियलमा अनुबन्ध हुने अन्तिम तयारीमा छन् ।
यसअघि नै उनले टिमलाई युरोपा लिगको उपाधि जिताएपछि क्लब चेल्सीलाई बाई–बाई गरिसकेका छन् । युरोपा लिगको फाइनलमा हाजार्डले खेलेको खेल चेल्सीका लागि अन्तिम खेल थियो ।
हाजार्ड रियलमा अनुबन्ध हुने पक्काजस्तै भएका बेला उनले बेर्नाबेउ पुगेपछि कति नम्बरको जर्सी लगाउँछन् भन्ने चासो धेरैलाई छ । स्पेनिस मिडियाले यो खबर छापेका छन् कि, रियलले हाजार्डलाई क्लबको ‘आइकनिक’ ७ नम्बर जर्सी दिने तयारी गरेको छ ।
रियलमा ७ नम्बर जर्सीलाई ‘आइकन’का रूपमा लिइन्छ । यसअघि यो जर्सी पोर्चुगिज क्रिस्टियानो रोनाल्डोले लगाएका थिए । तर, गत सिजनको अन्त्यसँगै रोनाल्डो रियल छाडेर इटालियन युभेन्टसमा अनुबन्ध भएपछि खाली जर्सी डियाज मारिआनोले लगाइरहेका छन् ।
तर, यदि हाजार्ड रियल पुगेको खण्डमा रप उनले ७ नम्बर जर्सी नै रोजेको अवस्थामा आफूले सो जर्सी छाड्ने डियाजले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
चेल्सीमा छँदा हाजार्डले १० नम्बर जर्सी लगाउँथे । तर, अब भने रियलको सेतो जर्सीमा उनलाई रियलका सर्वाधिक सफल र सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी रोनाल्डोले लगाउने गरेको ७ नम्बरमा जर्सीमा देख्न पाइनेछ ।
चेल्सीमा हाजार्डले लगाउने १० नम्बर जर्सी रियलमा लुका मोड्रिकले लगाउने हुँदा क्लबले मोड्रिकको जर्सी खोसेर हाजार्डलाई दिनेछैन ।
प्रकाशित मिति १८ जेष्ठ २०७६, शनिबार १३:४९